Mas'uuliyadda waxa ku jira
Adeeg bixiye ahaan, waxaan mas'uul ka nahay nuxurka ku jira bogaggan si waafaqsan sharciga guud sida waafaqsan Qeybta 7 (1) ee Xeerka Jarmalka ee Telemedia. Sida laga soo xigtay to 8 ilaa 10 TMG, adeeg bixiye ahaan, waajib naguma aha inaan kormeerno macluumaadka la soo gudbiyey ama la kaydiyo ee cid saddexaad ama in la baaro duruufaha tilmaamaya falalka sharci darrada ah. Waajibaadka saaran in laga saaro ama la joojiyo adeegsiga macluumaadka sharciga guud ahaan wali saameyn kuma leh. Mas'uuliyadda arrintan la xiriirta waxay suurtagal tahay oo keliya laga bilaabo waqtiga aan ku ogaanno xadgudub sharci oo gaar ah. Isla marka aan ogaano xadgudubyada sharci ee noocan oo kale ah, waan ka saari doonnaa waxyaabahaan isla markiiba.
Dalabkeenu wuxuu ka kooban yahay xiriiriyeyaal degellada websaydhada saddexaad ee saddexaad, kuwaas oo aynaan saamayn ku lahayn waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Sidaa darteed ma aqbali karno wax mas'uuliyad ah oo ku saabsan mawduucan dibedda ah. Bixiyaha ama hawlwadeenka bogagga ayaa had iyo jeer mas'uul ka ah waxyaabaha ka kooban bogagga isku xiran. Bogagga xiriirka la leh waxaa laga hubiyey xadgudubyo sharciyeed oo dhici karayey xilligii ay isku xirnaayeen. Wax sharci darro ah lama helin waqtiga isku xidhka. Xakamaynta joogtada ah ee waxyaabaha ku jira bogagga isku xiran ma ahan mid macquul ah iyada oo aan la helin caddayn la taaban karo oo ku saabsan xadgudub. Haddii aan ogaano xadgudubyada sharciga ah, waan ka saari doonnaa xiriiriyeyaasha isla markiiba.
Waxyaabaha ku jira iyo ka shaqeynta bogaggaan oo ay abuureen shabakadda internetka waxay ku xiran yihiin sharciga xuquuqda lahaanshaha Jarmalka. Ku-soo-celinta, ka-shaqeynta, qaybinta iyo nooc kasta oo dhiig-miirasho ah oo ka baxsan xadka sharciga xuquuqda daabacaadda waxay u baahan tahay oggolaansho qoraal ah ee qoraaga ama abuuraha u gaarka ah. Soo degsashada iyo nuqulada degelkan waxaa kaliya loo oggol yahay adeegsi gaar loo leeyahay, oo aan ganacsi ahayn. Ilaa inta ay ka kooban tahay boggan ma uusan abuurin hawl wadeenka, xuquuqda lahaanshaha ee dhinacyada saddexaad ayaa la eegaa. Gaar ahaan waxyaabaha ku jira dhinacyada saddexaad ayaa lagu calaamadeeyay sida oo kale. Haddiise aad ka warqabto ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha, waxaan kaa codsan doonnaa inaad na soo wargeliso si waafaqsan. Isla marka aan ogaano xadgudubyada sharciga, waan ka saari doonnaa waxyaabahaas isla markiiba.
xiro2 warbaahinta cusub GmbH